पछिल्ला दिनमा युट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङ हेर्ने हो भने सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ– कमेडी ! बुधबार युट्युब ट्रेन्डिङको ‘टप टेन भिडियो’ मध्ये चारवटा कमेडी नै भेटिए । यो साता पनि ‘कमेडी च्याम्पियन’, हास्य शृंखला ‘सक्किगो नि’, मुन्द्रेको कमेडी क्लब र हर्के हल्दार ट्रेन्डिङका १० स्थानमा तलमाथि गरिरहेका छन् । यसले युट्युबमा नेपाली दर्शकले हेर्ने सामग्रीमा कमेडी अघिल्लो स्थानमा रहेको देखाउँछ ।
त्यसो हुँदा–हुँदै पनि उनले नेपाली हास्यव्यंग्य साहित्यमा बलियो मानक बनाए । जसलाई पढ्दै हास्यव्यंग्यको बाटो हिँड्ने पुस्ता तयार भयो । हरिवंश आचार्यदेखि मनोज गजुरेलसम्म अर्यालबाट उत्प्रेरणा लिन्छन र आफू पनि त्यसकोटीको हास्यव्यंग्य सिर्जनाको सपना देख्छन् । बीसको दशकबाट नेपालमै सिनेमा बन्न थाल्यो । त्यसपछि हास्यव्यंग्य प्रदर्शनीको प्रचलनमा तीव्रता आयो । सिनेमामा पनि हास्य कलाकारिताले स्थान पायो । तर, त्यसबेला पनि सजिलो थिए । अझ महिला कलाकारको सन्दर्भमा त निकै नै जटिल थियो । कलाकार बसुन्धरा भुसाल भन्छिन्, ‘काम गर्नै गाह्रो थियो । त्यसमा पनि हास्यव्यंग्य क्षेत्रलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो । आईमाई भएर जोकर भएर खेल्ने ? भन्थे । आर्थिक हिसाबले समस्या त थियो नै ।’
राणाकालीन बन्द समयपछि खुला भएको समाजमा कलाकारहरू राजपाल, धुब्र हाडालगायत रंगमञ्चमा देखिए । उनीहरूले रंगमञ्चमा हास्यप्रस्तुति सार्वजनिक गर्न थाले । त्यसबेला काठमाडौंका नेवार वस्तीका ‘दबु प्याख:’मा त्यस्ता प्रस्तुति हुने गरेको हरिवंश आचार्य सम्झन्छन् । मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई उनले त्यही माहोलमा भेटे र उनले पनि आफ्नो प्रस्तुतिलाई निखारे ।
त्यसबेला राजपाल थापा र ध्रुव हाडाको जोडी, रामशेखर नकर्मी, गोपालराज मैनालीलगायत त्यस्ता कार्यक्रममा भेटिन्थे । श्रेष्ठले मुना स: (आवाजको जमघट) भन्ने संस्थाको स्थापना गरेर संगीत र कमेडीलाई संयोजन गरेर कार्यक्रम थालेका थिए । पञ्चायतको बन्द समय सुरु भएपछि रंगमञ्चको त्यो प्रस्तुति सिनेमामार्फत व्यक्त हुन थाल्यो । सिनेमा निर्देशक नीर शाह सम्झन्छन्, ‘नेपालमा छायाँकन भएको पहिलो चलचित्र आमामा नै हास्य विधाको प्रयोग भएको थियो । त्यसअघि सत्य हरिश्चन्द्रमा पनि हास्य रसको प्रयोग भएको पाइन्छ ।’ रंगमञ्चको हास्यले सिनेमामा स्थान त पायो, तर त्यसले मूल कलाकारिताको दर्जा भने पाउन सकेको थिएन ।
नेपाल टेलिभिजनमा सन्तोष पन्तका कार्यक्रम ‘अप्रिल फूल’, ‘यस्तै हुन्छ’ पनि आए । त्यस्तै ‘दोषी को ?’, ‘नरिसाउनोस् है’ लगायतका कार्यक्रमले उनलाई चर्चित बनायो । पचासको दशकसँगै दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौलालगायत आए । दीपक–दीपाको रेडियो कार्यक्रम ‘रामविलास–धनियाँ’ श्रोतामाझ चर्चित बन्यो । साठीको दशकमा उनीहरूले सुरु गरेको ‘तीतो सत्य’ले पनि दर्शकलाई उत्तिकै आकर्षित गर्‍यो । दीपक सम्झन्छन्, ‘हामीलाई चाहिँ रेडियोले स्रोतामाझ परिचित बनायो । पछि टेलिभिजनमा दर्शकले रुचाए ।’